Gnomecast, application yekuda kuziva iyo ichatibvumidza kushandisa Chromecast paGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Imwe yeakanyanya kufarirwa uye anoshanda magajeti andakashandisa mumakore apfuura yave Google Chromecast. Iyo gadget yeGoogle inotibvumidza kutora izvo zvinoonekwa nekombuta yedu kana smartphone paterevhizheni, purojekita kana hombe skrini Nekudaro, ichi chishandiso hachina software yeGnu / Linux. Isu tinongova neGoogle neChromium webhu bhurawuza, asi mune ese maviri mashandiro ayo haana kunyatsonaka.
VLC mutambi achangokwanisa kuwana maficha eChromecast asi yanga isiri iyo yega. Mugadziri keredson yakagadzira kuwedzerwa kweGnome iyo ichatibvumidza isu kutumira chero faira kubva kudesktop kuenda kuChromecast kifaa. Ichi chirongwa chinonzi Gnomecast.Nehurombo Gnomecast kwete yepamutemo gnome yekuwedzera. Asi isu tinogona kuiisa pane yedu Gnu / Linux kugovera. Pane yepamutemo Gnomecast repository Izvo hazvine chete ekuisa mafaira asi zvakare ine yekuisa gwaro, asi maitiro acho ari nyore kwazvo kuita.
Kutanga isu tinofanirwa kuisa Python PIP. Tichaita izvi nekutaipa mune inouraya:
Mushure mekuisa iyi software, Tinogona ikozvino kuisa Gnomecast. Kuti tiite izvi, isu tinovhura iyo terminal (kana isu takaivhara) uye totevera zvinotevera:
Izvo zvakakosha chiite nemutemo weSudo kubvira neimwe nzira, kana isu tichiita Gnomecast tichava nematambudziko kana tichizviona. Kana tangoisa izvi, tinogona kumhanya neGnomecast, kune izvi isu tinogona kuitsvaga kana kungomhanya iyo Gnomecast yekuraira mune inouraya.
Iyo skrini ichaonekwa ichatibvumidza sarudza chishandiso kutumira iyo faira ku, iyo faira yatinoda kuitisa uye nemadhigirii ekuratidza iyo faira. Chinhu chakareruka uye chakafanana nechero multimedia player.
Kuiswa uye kumisikidzwa kwe Gnomecast chimwe chinhu chakananga uye chiri nyore, asi kana iwe uchifunga kuti zvakakuomera, unogona kugara uchisarudza kushandisa yazvino vhezheni yeiyo vlc mutambi Unosarudza chii?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Gnomecast, application yekuda kuziva iyo ichatibvumidza kushandisa Chromecast paGnu / Linux